सहकारी ऐनको धज्जी उडाउँदै नेफ्स्कून ! | Nepal's No.1 Co-operative News Portal
सुप्रिम साकोसको नवौं साधारणसभा सम्पन्न, १ करोड ६१ लाख राजश्व दाखिला
अनुकरणीय प्रविधि प्रयोगमा विकू बचत उत्कृष्ट
सर्वोत्कृष्ट साकोस कल्याणकारी र सक्रिय महिला
सल्लेरी सहकारीका अध्यक्ष कृष्ण बि.क बुटवलबाट पक्राउ
आदर्श सहकारीले प्रदेशकै उत्कृष्ट सञ्चारगृह बनाउने
चन्द्रागिरि साकोसका सदस्यलाई व्यवसायिक साक्षरता तालिम
क्षणिक आवेशमा आएर सन्दर्भ ब्याजदरको विरोध नगर्न रष्ट्रिारको आग्रह
Home अर्थतन्त्र [Economic] सहकारी ऐनको धज्जी उडाउँदै नेफ्स्कून !
सहकारी संघ/संस्था सञ्चालन हुने आधार भनेको सहकारी ऐन हो । तर सबैभन्दा ठूलो कानुन ‘सहकारी ऐन’ उल्लंघन अविभावक निकायले गर्दै आएको खुलेको छ ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)ले सहकारी ऐन २०७४ विपरित काम गरेको तथ्य खुलेको हो । नेफ्स्कूनको २७ औं साधारणसभा पुस ५ र ६ गते काठमाडौंमा भएको थियो । उक्त साधारणसभामा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन हेर्दा नेफ्स्कूनले सहकारी ऐन २०७४ विपरित काम गरेको पुष्टि हुन्छ ।
सहकारी ऐन २०७४ अनुसार प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म मात्र बचत संकलन गर्न पाउछ । उक्त ऐनको परिच्छेद ७ को दफा ५१ को उपदफा ७ ले भन्छ, ‘सहकारी संस्थाले प्राथमिक पूूँजी कोषको पन्ध्र गुणासम्म बचत संकलन गनन सक्नेछ ।’ तर नेफ्स्कूनको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को अडिट रिपोर्ट अनुसार संघको सेयर पूँजी १७ करोड ७९ लाख १२ हजार ४ सय रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै जगेडा तथा अन्य कोषमा ५ करोड ५५ लाख ८८ हजार ९ सय ५४ रुपैयाँ रहेको छ । यो दुबै रकम जोड्दा २३ करोड ३५ लाख १ हजार ३ सय ५४ रुपैया कुल पूँजी तथा जगेडा कोषमा देखिन्छ । जुन रकम प्राथमिक पुँजी कोषको रकम हो ।
कुल पूँजी तथा जगेडा कोषको १५ गुणा हिसाब गर्दा ३ अर्ब ५० करोड २५ लाख २० हजार ३ सय १० हुन आउँछ । ऐन अनुसार नेफ्स्कूनले ३ अर्ब ५० करोड २५ लाख २० हजार ३ सय १० रुपैयाँसम्म मात्र बचत संकलन गर्न पाउँछ । तर नेफ्स्कूनले ४ अर्ब २७ करोड ७४ लाख ६२ हजार ६ सय ५३ रुपैयाँ सदस्यबाट बचत संकलन गरेको छ । यो रकम १८ गुणाभन्दा माथी हो ।
ऐनको सिमाभन्दा माथी गएर बचत संकलन गर्ने अधिकार नेफ्स्कूनलाई कसले दियो ? सदस्य संस्थालाई नियम, कानुनमा हिड्न सिकाउनुपर्ने संघले आफ्नै नियमको धज्जी उडाउँदै हिड्न मिल्छ ? हजारौं सहकारीको नेतृत्व गर्ने नेफ्स्कूनले मनपरी गर्छन भने संघमा आबद्ध सहकारीलाई कसरी सही नेतृत्व गर्न सक्छन् ?
१० गुणा नकटाउन सहकारीलाई निर्देशन
नेफ्स्कूनमा आवद्ध सहकारी संस्थालाई १० गुणा सिमा नकटाउन निर्देशन दिदै आएको छ । प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म मात्र बचत संकलन गर्न पाउने अधिकार सहकारीलाई भएपनि १० गुणा भन्दा माथी नजान निर्देशन दिन्छ तर नेफ्स्कून आफैले भने १८ गुणा कटाएको छ ।
जब कार्यक्रम चलिरहँदा लाग्यो ‘मुर्दाबाद’को नारा
ब्याजदर प्रकरणले उब्जाएका प्रश्न
सहकारीको ब्याजदरमा सीमा : नियन्त्रण कि नियमन ?
राष्ट्रिय सहकारी बैंक स्थापनाको १७ औं वर्ष, अबको बाटो के ?
एउटै विषयमा देशभर सहकारीका ४४ कार्यक्रम
अब सहकारीले कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिए के हुन्छ ?
‘बचतकर्ताले अधिकतम प्रतिफल पाउने र ऋणीले चर्को ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य’
सुप्रिम साकोसको वित्तीय विवरण सार्वजनिक
राष्ट्रिय सहकारी बैंकले अब सेवा शुल्क नलिने
सहकारीका सदस्यलाई खुसीको खबरः सहकारीको ब्याजदर अधिकतम् १६ %
जब कार्यक्रम चलिरहँदा लाग्यो 'मुर्दाबाद'को नारा
अन्तत सहकारीको ब्याजदर अधिकतम् १६ प्रतिशत, आइतबारबाट देशभर लागू हुने
Archives Select Month August 2019 (31) July 2019 (16) June 2019 (20) May 2019 (17) April 2019 (42) March 2019 (7) February 2019 (8) January 2019 (42) December 2018 (29) November 2018 (12) October 2018 (2) September 2018 (20) August 2018 (12) July 2018 (11) June 2018 (25) May 2018 (17) April 2018 (6) March 2018 (35) February 2018 (18) January 2018 (16) December 2017 (30) November 2017 (13) October 2017 (16) September 2017 (18) August 2017 (19) July 2017 (6) June 2017 (10) May 2017 (9) April 2017 (24) March 2017 (18) February 2017 (7) January 2017 (42) December 2016 (64) November 2016 (30) October 2016 (22) September 2016 (32) August 2016 (33) July 2016 (36) June 2016 (72) May 2016 (24) April 2016 (47) March 2016 (49) February 2016 (47) January 2016 (68) December 2015 (47) November 2015 (27) October 2015 (23) September 2015 (47) August 2015 (49) July 2015 (52) June 2015 (93) May 2015 (77) April 2015 (95) March 2015 (61) February 2015 (73) January 2015 (59) December 2014 (85) November 2014 (101) October 2014 (67) September 2014 (132) August 2014 (148) July 2014 (126) June 2014 (63) May 2014 (77) April 2014 (76) March 2014 (51) February 2014 (41) January 2014 (73) December 2013 (101)